Talo-celinta Lacag-bixinta ee Lacag-bixinta ah ee Lacag-bixinta ah ee Lagu Caawinayo Sida Spam Emailka looga hortago
Spam hadda waa muuqaal joogto ah nolosheena maalin walba. Laga soo bilaabo sanadkii 2011, 77.8% dhammaan emails ayaa helay spam, kaas oo ah 8 ka mid ah tobankii emaarba. Qofna ma doonayo in uu helo email spam tan iyo qaar ka mid ah ay ka danbeeyaan tuugada ama faafinta jeermiska - проверить ширину кaнaлa. Kalluumaysiga iyo xayawaanku waxay dib u eegayaan emaylka spam. Tusaale ahaan, in ka badan 319 emails, mid waa phishing, iyo out of 281 emails, mid ka mid ah waa xajiye. Sidaa darteed, spam waxay si weyn u saamayn kartaa nidaamka ganacsiga.
Ross Barber, oo ah Maamulaha Guud ee Macaamilka Nidaamka Macaamilka Macaamiil wuxuu bixiyaa siyaabaha soo socda si uu u yareeyo tirada garaashyada ku xiraya sanduuqa emailka.
1. Qaadashada taxaddarrada lagama maarmaanka ah
Xaaladaha intooda badan, ka hor inta uusan spamku bilaabmin spamming, waa inay ogaadaan cinwaanka emailka qofka qaata. Sidaa darteed, dadka isticmaala waxay u baahan yihiin inay isticmaalaan isticmaale-yahanada adag si ay u adkeeyaan iyaga si ay u soo saaraan. Noocyada ay isticmaalaan waxay caadi ahaan ka dhigaan cinwaanno cad oo sahlan. Marka lagu daro tan, mid waa inuu horay u soo dhigaa email ka hor inta aan la furin. Haddii emailku u egyahay spam, fikrad wanaagsan ayaa ah inay tirtirto.
2. Iska ilaali inaad cinwaanka emailka ku dhigto internetka
Rootiyayaashu waxay awood u leeyihiin in ay soo ururiyaan kumanaan cinwaanno email ah oo ka yimaada boggaga oo cinwaanada emailka ka dhigaya dadweynaha. Qaadashada taxadar dheeraad ah markaad ku biireyso golaha ama diiwaangelinta dallacaadda alaabtu waa go'aan fiican. Haddii qofku iska diiwaangeliyo adeegyadan, midna waa in uusan isticmaalin meheradaha ama emailada guriga. Fariin gaar ah u leh ujeedadaas ayaa ugu fiican.
3. Hubso inaanay suurtogal ahayn in lagu sawiro cinwaanka emailka
4. Iska xakamee oo ku soo sheeg spam on Gmail
Google wuxuu si toos ah u ogaanayaa isbaarada kuna ridaan faylka spamka. Si aad u sahlanaato Google si aad u fuliso shaandhayntan, waa inuu soo sheegaa wixii email ah oo shaki ku jiro. Gmail wuxuu bixiyaa sifooyin halka mid ka mid ah riixaya "Spam Spam", isla markiiba way iska xejineysaa. Habkan, dhammaan emailada ka soo diraha gaarka ah ma gaari karo cinwaanka emailka qof walba.
5. Iska ilaali inaad ku xirto lifaaqyada boosteejada spam
Qaar ka mid ah lifaaqyada spam waxay ka kooban yihiin trojans kuwaas oo infekshanku ku qaadi karo kombuyuutarka. Trojans Kuwaasu waxay ku xiran yihiin kombuyuutarka ku yaala midka loo yaqaan silsiladda qaybinta spam. Kiisaska kale, Trojan waxay isticmaali kartaa kambiyuutarka si loogu qaybiyo emaylka spam si ay ula xiriiraan liiska emailka, ama kuwa kale. Iyada oo ay u nugul yihiin, spamerku wuxuu leeyahay liiska xiriirka shakhsi ahaanta ah ee gacmahooda, taas oo dhibane u ah inuu email u diro sidoo kale.
Si loo ilaaliyo ammaanka kombuyuutarrada iyo sidoo kale ganacsiga, khubarada ayaa dadka ku booriyay inay isticmaalaan amniga si ay kombiyuutarada loogu baaro si loo hubiyo in ay yihiin kuwo bilaash ah oo ka badbaado nacaybka. Khayraadka kale sida TotalSystemCare, oo ay bixiso SafeBytes ayaa ah mid aad u fiican marka ay timaado tirtiridda faylasha qashinka, kicinta kombiyuutarada, iyo kobcinta waxqabadka.